पार्टीले बल प्रयोगको प्रस्थापनालाई छोडेको छैन – Janaubhar
पार्टीले बल प्रयोगको प्रस्थापनालाई छोडेको छैन
प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २३, २०६९ | 133 Views ||
-[नवराज सुवेदी] (संयोजक)
एकीकृत नेकपा माओवादी थारुवान राज्यसमिति
मुलुकको राजनीतिक अवस्था निकै संकटमा फस्दै जान थालेको छ, के दलहरुबीच निकास निकाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
परिस्थिति केही जटिल अवश्य देखिएको हो तर समाधानै हुन नसक्ने भन्ने लाग्दैन । १२ बुँदे समझदारी र ०६५ जेठ १५ को गणतन्त्र घोषणा र संघीयताको मर्मलाई पक्रनेहरु एक ठाउँमा बसेर सहमति खोज्नुको कुनै विकल्प छैन ।
दलहरुबीच सहमतिमा पुग्नै नसकिने किसिमको द्वन्द्व कुर्सीका लागि हो वा वर्गीय रुपको टकराव ?
सतहमा कुर्सीका कुरा लागे पनि वर्गीय समाजमा वर्गीय स्वार्थहरु बीचको टक्कर नै प्रधान पक्ष हो । निश्चित संक्रमणकालीन जटिल परिस्थितिले गर्दा प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि आ–आफ्ना दीर्घकालीन नीति र स्वार्थलाई स्थगित गरेर साझा स्वार्थहरु पूरा गर्न लागि पर्नु अहिलेको ठोस परिस्थिति र कार्यनीतिको केन्द्रीय प्रश्न हो ।
अहिलेको यही स्थिति रहेमा मुलुकको अवस्था के हुने देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको जस्तो स्थिति लम्बिरहँदा यथास्थितिवादी, निरंकुशतावादी र प्रतिगामी तत्वहरुलाई बल मिल्ने छ । वैदेशिक दबाब, हस्तक्षेप र चलखेलमा वृद्धि हुनेछ । जनताको मनोबल पनि कमजोर हुनेछ तर नेपाली जनताको चेतनास्तर एक हदसम्म माथि उठेकाले तत्काल अनपेक्षित घटना टार्न जनता अझैं सक्षम छन् भन्ने लाग्छ तर यो ढिलाइ निरन्तर बढेमा जनताका अधैर्यता विभिन्न ढंगले प्रकट नहोलान् भन्न सकिन्न ।
अब पार्टीको अवस्था बुझ्नतिर लागौं, पार्टीको आसन्न महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ र कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी सम्पूर्ण रुपले महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेको छ । सदस्यता नवीकरण पूरा भई हाल गाउँ–नगर र क्षेत्रीय सम्मेलन तथा भेलाहरु चलिरहेका छन् ।
पार्टीले काठमाडौंमा नगरी किन हेटौंडामा महाधिवेशन गर्न लाग्नुभएको हो ? अहिलेको यही राजनीतिक परिवेशभित्र महाधिवेशन हुने स्थिति छैन पनि भन्छन् नि ।
हेटौंडा देशको केन्द्रीय भागमा पर्छ । पूर्व–पश्चिम सबैतिर रहेका नेता–कार्यकर्तालाई सुगम होस र धेरै ठण्डी महसुस नहोस् भनेर हेटौंडालाई महाधिवेशनस्थल रोजिएको हो । जहाँसम्म महाधिवेशन नै हुन सक्तैन भन्ने कुरा हो, त्यो अफवाह र गलत प्रचारमात्र हो । सबै नेता–कार्यकर्ताहरुको यतिखेरको दौडधुप र परिश्रम महाधिवेशन सफल तुल्याउनमै केन्द्रित रहेको छ । महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न नगरेसम्म यो चरणमा कसैले पनि झोला बिसाउने छैनौं ।
तपाईंहरुले राज्यको सम्मेलन नगरी जिल्लाबाट केन्द्रीय महाधिवेशनमा जाने निर्णय गर्नुभयो फेरि कम्युनिष्ट पार्टीको सिष्टम महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कार्यदिशा सम्बन्धी प्रतिवेदनको विचारधारात्मक छलफल र वहस तलैबाट गरेर संश्लेषण गर्नुपर्ने होइन र ? तल खाली संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि मात्र भेला सम्मेलनहरु भएको जस्तो देखियो नि ?
अहिलेसम्मको हाम्रो पार्टी संरचनामा मनोनित कमिटीहरुले काम गरिरहेका थिए । संगठनको मुख्य केन्द्रमा जिल्ला एकाइहरु रहेकाले अब जिल्ला सम्मेलनहरु सम्पन्न हुनेछन् । त्यसले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको चयन गर्नेछ । जनवादी केन्द्रीयताको विधिअन्तर्गत सकेसम्म सहमतिमा र सहमति नबने निर्वाचनद्वारा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु चयन गरिनेछ । जहाँसम्म राज्य समितिको प्रश्न हो । महाधिवेशन प्रक्रिया बढी सहभागितामूलक, जनवादी, स्वच्छ र कुनै अनुचित प्रभाव नपरी सम्पन्न होस भनेर राज्य समितिका सदस्यहरु पनि जिल्लाद्वारा नै चुुनिएर जानुपर्ने भनिएको हो तर कार्यदिशासम्बन्धी छलफल भने सबै तहमा हुनेछन् । समयको चाप र राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा आएको तरलताले गर्दा दस्तावेजहरु तयारी हुन समय लागेको हो । अब ढिलाइ हुँदैन ।
कार्यदिशाको छलफल तल्ला कमिटीहरुबाट शुरु गर्दै अन्ततः महाधिवेशनले टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने भनाइ सही हो र त्यसअनुसार नै छलफल अगाडि बढ्छ ।
आगामी कार्यदिशा र कार्यक्रम सम्बन्धी पार्टीमा कस्तो खाले छलफल बहस चलिराखेको छ ?
भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न सातौं विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावलाई विस्तृत व्याख्यासहित पूर्ण आकारमा ल्याई त्यसलाई महाधिवेशन प्रक्रियामा छलफल र समीक्षा गरि पारित गरिनेछ । केही नयाँ प्रस्थापनाहरु– नेपाली समाजको बदलिदो आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध, नयाँ विश्व व्यवस्था, साम्राज्यवादको बदलिदो चरित्र र नेपाली क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीतिका नयाँ योजनाबारे पार्टीमा अहिले पनि बहस भइहेका छन् र जिल्ला सम्मेलनहरुमा त्यसबारे थप बहस हुनेछन् । त्यसैगरी तत्कालिक कार्यक्रम र नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको अवस्था, सर्वहारावर्गको पार्टीको लागि सांगठनिक प्रस्ताव र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव आदि बारे पनि बहस हुनेछन् ।
राजनीतिक परिवर्तनका एजेण्डाहरु शान्तिपूर्ण रुपले सहमतिको प्रकृयाबाट अघि बढ्न पनि नदिने र सशस्त्र संघर्षको कार्यदिशा पनि पार्टीले छोड्दै जाने हो भने सर्वहारावर्गको मुक्तिको प्रश्नमाथि कुठाराघात त हुन जान्छ नि होइन र ?
पार्टीले बल प्रयोगको प्रस्थापनालाई छोडेको छैन र छोड्न सक्दैन । सशस्त्र संघर्ष, जनसंघर्ष र जनविद्रोह संघर्षका तीनैथरि रुपहरुलाई परिस्थितिमा हुने हेरफेरसँगै कहिले कुन र कहिले कुन अपनाएर जानु नै द्वन्द्ववादको सही प्रयोग ठहर्छ । शान्तिपूर्ण ढंगले बढ्ने सबै बाटाहरु बन्द भएमा अहिलेका तरिका छाडिनेछ । तर, जुन आकार र मात्रामा आज हामी आम जनतामा पुगेका छौं र उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको भरोसाको रुपमा हाम्रो पार्टी स्थापित भएको छ । त्यसका आधारमा अहिले यही कार्यनीतिबाट बढ्न सकिन्छ भन्ने हो तर यसलाई नै सशस्त्र संघर्षको तिलाञ्जली भयो भन्न मिल्दैन ।
केही महिनाअघि पार्टीले गठन गरेको नेता, कार्यकर्ताको सम्पति छानविन समितिको सदस्यमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ, किन ढिलाइ गरिरहेको छ समितिले छानविनको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न ? पार्टीभित्रै वर्गउत्थान हुन थालेको स्थिति हो ?
हामी सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा छौं । यतिबेला हामी कतिपय साथीहरुको भूगोलमा पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले दोहोरो कामको चापमा हामी प¥यौं तर अब ढिलाई हुँदैन । पार्टीलाई लौह अनुशासनमा राख्ने हामी सबैको प्रतिवद्धता छ । वर्ग उत्थान हुन थालेका कुरा आएका छन् । यसबारे नेतृत्व तहबाट नै महशुस भइसकेको छ । पार्टी सम्पूर्ण रुपले बिग्रिसक्यो भन्ने होइन । हामी सर्वहारावर्गकै पार्टी बनिरहन्छौं । त्यसका लागि नै शुद्धिकरणका विधिहरु अगाडि सारिएका हुन् ।
पार्टीभित्र कम्युनिष्ट आचरण विपरित देखिने विविधखाले कार्यशैली र प्रवृतिगत समस्याहरुको हल कसरी हुने देख्नुहुन्छ ?
सर्वहाराकरण, आचरणमा शुद्धता र अनुशासन पालनाको संकल्प मुखले भनेर मात्र हुँदैन, नियमित व्यवहारमा झल्कनुपर्दछ । त्यसैले कम्युनिष्टहरुले एक, दुई फेरा होइन, जीवनभर नै परीक्षा दिइरहनुपर्दछ । त्यसैले सर्वहाराकरणलाई शुरु र अन्त्य होइन निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाका रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।
यहाँ पार्टीको थारुवान राज्यको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, थारुवानमा पार्टीको अवस्था के छ ?
थारुवान राज्य भूगोल, पहिचान र बसोबास सबै कोणबाट नेपालको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जनसंख्याका दृष्टिले पनि यो निरन्तर वृद्धिमा छ । प्राकृतिक श्रोतहरुको सही सदुपयोग हुन सके थारुवान निकै समृद्ध राज्य बन्नसक्छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ । साँस्कृतिक पहिचानका दृष्टिले पनि यो धनी छ । हाम्रो पार्टीको यो एउटा महत्वपूर्ण आधार क्षेत्रका रुपमा पनि रहिआएको छ ।
अन्त्यमा, नौलो जनउभार साप्ताहिकमार्फत् केही भन्नु छ कि ?
नौलो जनउभार साप्ताहिकले जनताका पक्षमा निरन्तर आफ्ना विचार र भावना पस्कोस् यही मेरो शुभकामना छ ।
Prevसपना खोसिएको मालचरी
Nextसत्ता संघर्षले संविधान ओझेलमा